Môssieur Njo : « Raiki-pitia tamin’ny teny Malagasy aho ! » – Blaogin'i Voniary
Mpankafy « Question Pour Un Champion », mpamaky boky vahiny betsaka nefa tsy manary ny kolontsaina Malagasy. Sady manoratra amin’ny teny malagasy izy no manoratra amin’ny teny frantsay. Nivoaka tamin’ny 16 Desambra teo ny boky malagasy faharoa nosoratany : « Lisy Mianjoria ».Moa va tsy tanteraka ao aminy ilay teny filamatra hoe « Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko » ! Indro ary ny tafatafa nifanaovana tamin’ i RAMAROSON Anjoanina Harivahy na Môssieur Njo
Môssieur Njo : Ny bebenay no tena akaiky ahy tamin’ny fahazazako. Fahazaranay mianaka ny mijery « Question Pour Un Champion » isan-kariva ka nahatonga ahy mankafy io lalao io hatramin’izao. Nanoratra diary i bebe tamin’izany fa tsy nasehony ahy mihitsy. Izaho koa tetsy andaniny nanomboka nanoratra tantara fohifohy isan-karazany. Tia mamaky boky koa aho sady mpikambana tao amin’ny trano famakiam-boky CCAC. Ny tena marina dia azo atao hoe olona liam-pahalalanana sy liana amin’ny zavatra rehetra aho. Izay angamba no nahatonga ahy nahay tany am-pianarana.
V: Taiza ho aiza no tamin’izany no nifampikasohanao tamin’ny literatiora sy riba Malagasy ?
MN : Ny fianarana norantoviko aloha dia tsy misy ifandraizany amin’izany mihitsy. Fa noho izaho tia mikaroka sy tia mamaky boky dia namaky boky malagasy koa aho. Hitako fa misy raitra tokoa ny asa soratra malagasy ary ankafiziko indrindra ny an’i E. D. Andriamalala. Raiki-pitia aho ka niezaka nandalina ny teny sy ny kolontsain-drazantsika tamin’ny alalany vaky boky. Tsy vitan’izany fa nandritra ny taona maro dia nirotsaka ho mpandrindra ny vondrona Fiteny Malagasy ao amin’ny Facebook aho. Adin’ny telo isan’andro mihitsy tamin’izany no natokako nanentanana sy nifaneraserana tamin’ny mpiray vondrona ka nahafahako nianoka tao anatin’ny teny malagasy madio rano.
V : Inona no tena ireharehanao amin’izay zavatra niainanao ?
MN : Tsy manary fako eny an-dàlana ! Fanamby napetrako izany ary vitako dia faly sy mirehareha aho.
V : Inona ny teny manentana anao ?
MN : Misy tenin’i Benjamin Franklin izay manao hoe : « Ny tena kristianina dia manasoa ny fiarahamonina fa tsotra kokoa ny mandeha miangona dia lasa mirona any ny olona ».
Tiako koa ity tenin’ i E. D. A ity hoe: « Hadinontsika fa ny tena votoatin’ny atao hoe fandrosoana dia fiezahana hihataka amin’ny maha-biby mba hanakatra fiainana sy fiaraha-monina ambonimbony kokoa sy mahafinaritra kokoa. »
V : Mba zarao aminay àry ny fanirianao ho an’i Madagasikara ?
MN : Mba ho tany sambatra tokoa ! Azo tanterahina tsara izany ka ! Maro ny vahaolana efa natolotra fa tsy voatery mitady lavitra. Betsaka manko ireo mpanoratra malagasy no efa nanome vahaolana raha tsy ilaza fotsiny an-dry E. D. Andriamalala ao anatin’ny boky Ny Fanagasiana na Lucile Ramanandraibe ao amin’ny « Le livre vert de l’espérance malgache ». Na ny tamin’ireo fitondrana nifanesy na tamin’ny faha-mpanjaka dia misy lesona tsara azo tsoahina sy ampiharina amin’izao fotoana izao. Ny tena marina dia mila mitodika amin’ny lasa isika Malagasy. Ho fanampin’izany, mila mahay miatrika ny fanatontoloana koa isika fa tsy mety ny manohitra azy io amin’ny fomba bontolo izany hoe mitazona ny tsara ananantsika ary maka ny soa avy any ivelany.
ED Andriamalala, lisy mianjoria, môssieur njô, môssieur njô mpanoratra, mpanoratra malagasy, teny malagasy